जापानी टीम खेल! तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ आश्चर्यजनक व्यवहार - Best of Japan
मान्छे संग सद्भाव! ４ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुन जापानीले वरपरका मानिसहरूसँग सद्भाव राख्दछ >
जापानी खेल को आयोजन मा राम्रो छ। जापानीहरूले समूहमा एक अर्कालाई मद्दत गर्छन् र उच्च परिणामहरू उत्पादन गर्छन्। मलाई लाग्छ कि यी विशेषताहरूको अंश देख्न सकिन्छ तपाईं जापानमा रहँदा। उदाहरण को लागी, बिहानको भ्रमण समय मा जापानी व्यापारिक मानिसहरु एक ठूलो स्टेशन मा व्यवस्थित मा सार्न। शिंकान्सेनको घरमा ट्रेन भित्र सफा गर्ने जिम्मेवार महिलाले प्रत्येक गाडीलाई राम्ररी सफा गर्नेछन्। यस्तो टोली खेल देख्न चाखलाग्दो हुन सक्छ।
जापानीले संगठनात्मक खेलमा देखाईएको प्रदर्शन
जापानी सामूहिक व्यवहार तपाईं शहर मा साक्षी दिन सक्नुहुन्छ
सबै भन्दा पहिले, कृपया तलको भिडियो हेर्नुहोस्। युवा जापानी पुरुषहरूले विशेष गरी भिडियोको दोस्रो भागमा उत्कृष्ट संगठन खेल देखाउँछन्।
एलिमेन्टरी स्कूलको समयदेखि, जापानीहरूले विभिन्न संस्था खेल सिके, उदाहरणका लागि एथलेटिक फेस्टिवलमा। त्यसोभए, यदि जापानीले कडा अभ्यास गरे, उनीहरूले माथि पनि प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
जापानी व्यक्तिहरू व्यवसायमा पनि यस प्रकारको संगठनात्मक खेलको महत्त्व राख्छन्। जापान आउने पर्यटकहरूलाई जापानी जनताको अवस्थालाई काममा हेर्ने मौका नहुन सक्छ। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि यात्राको क्रममा विभिन्न दृश्यहरूमा जापानी संगठनात्मक खेलको अंशको झलक पाउन सम्भव छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं बिहानको हडबड मा एक ठूलो स्टेशन जानुभयो भने, तपाईं अर्को फिल्म जस्तै जापानी व्यवसाय मान्छे क्रम मा हिंड्न हेर्न सक्नुहुन्छ। जापानी मानिसहरु काममा आउने बित्तिकै, उनीहरु चुपचाप हिँडछन् जसले मानिसहरुको बहावलाई बाधा नपुर्‍याउँछ। ब्यापारी मानिसहरू टाढा हिडने व्यस्त हुनेछ, तपाईं धेरै देखे बिना।
यदि तपाईं टोकियो स्टेसनबाट शिन्कानसेनबाट जान चाहानुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि यो चाखलाग्दो छ कि तपाईं अलि अलि अगाडि टोकियो स्टेशनमा आउनुभयो र शि Sh्कनसेनको होममा सफाई कर्मचारीको सामूहिक व्यवहार देख्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई प्रत्येक बुलेट ट्रेनमा minutes मिनेट समय दिइनेछ। दिईएको समयमा उनीहरूले तोकिएका गाडीहरू चाँडै सफा गर्नेछन्। प्रत्येक shinkansen यात्रुहरु लिन र सफाई समाप्त भएको बित्तिकै प्रस्थान हुनेछ त्यस पछि, अर्को शिन्कानसेन आइपुग्छ, त्यसैले उनीहरूले फेरि बुलेट ट्रेन सफा गर्नेछन्। यस्तो संगठन खेल संग, Shinkansen ढिलाइ बिना एक पछि अर्को छोड्न सक्छ।
"व्यक्तिहरूसँग सद्भाव" फिर्ता